ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်တိုင်နားလည်နိုင်မဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း… – Trend.com.mm
Posted on August 31, 2019 August 29, 2019 by Shun Lei Phyo
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်နားလည်မရ ဖြစ်နေတဲ့ အခိုက်အတန့် မျိုးတွေရှိဖူးကြမှာပါ။…ဒါက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အားငယ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အခုက စပြီးကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရလိုက်ပါ… ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားလည်ရခက်တဲ့ စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ဖို့လည်း တစ်စ တစ်စနဲ့အားနည်းလာတတ်ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေများလွန်းတဲ့သူ၊ ဖိအားအ ပေးခံရမှုများလွန်တဲ့သူနဲ့၊ စိတ်ကျဉ်းကျပ်မှုတွေများတဲ့သူတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ အိမ်တွင်းအောင်းပြီးဗဟုသုတ အင်မတန်နည်းလွန်းတဲ့သူတွေမှာ ဒီလို စိတ်ခံစားမှု တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိတဲ့အခြေနေမျိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားမလည်နိုင်တဲ့ အေ ခြေနေမျိုးရောက်လာတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်လဲ?
ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်မ ထားပဲလွတ်ပေးထားပါ(စိတ်ရောလူရော လွတ်လပ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်)
အားကစားများများလုပ်ပါ( အားကစားလုပ်ခြင်းက တစ်ခါတစ်ရံသင့်ရဲ့စိတ်ကိုပါ အလိုလိုပွင့်လာစေပါတယ်)
ပြင်ပနဲ့ထိတွေ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က စကားသံတွေ၊ သုံးသပ်ချက်တွေကိုနားထောင်ပါ
အပြစ်တင်မှုတွေကို လျစ်လျူရှုပါ
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားမလည်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အ ခြေ နေကနေမြန်မြန်လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယျကိုယျတိုငျက ကျိုယျ့စိတျကို ကိုယျနားလညျမရ ဖွဈနတေဲ့ အခိုကျအတနျ့ မြိုးတှရှေိဖူးကွမှာပါ။…ဒါက ကိုယျတဈယောကျတညျးပဲဖွဈနသေလားဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ အားငယျနတေတျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ အခုက စပွီးကိုယျတဈယောကျတညျးမဟုတျဘူးဆိုတာ သတိရလိုကျပါ… ဒီလိုကိုယျ့ကိုယျကိုယျနားလညျရခကျတဲ့ စိတျကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတျောတျောမြားမြားဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျဖို့လညျး တဈစ တဈစနဲ့အားနညျးလာတတျကွပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ စိတျရှုပျထှေးမှုတှမြေားလှနျးတဲ့သူ၊ ဖိအားအ ပေးခံရမှုမြားလှနျတဲ့သူနဲ့၊ စိတျကဉျြးကပျြမှုတှမြေားတဲ့သူတှေမှာ အမြားဆုံးဖွဈတတျပါတယျ။ နောကျတဈခုရှိတာကတော့ အိမျတှငျးအောငျးပွီးဗဟုသုတ အငျမတနျနညျးလှနျးတဲ့သူတှမှော ဒီလို စိတျခံစားမှု တှေဖွဈပျေါတတျပါတယျ။
ဒီလိုကိုယျ့ကိုယျကိုယျဘာဖွဈခငျြမှနျးမသိတဲ့အခွနေမြေိုး၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနားမလညျနိုငျတဲ့ အွေခနေမြေိုးရောကျလာတဲ့အခါ ဘာလုပျသငျ့လဲ?
ကိုယျကိုယျကိုယျ ထိနျးခြုပျမ ထားပဲလှတျပေးထားပါ(စိတျရောလူရော လှတျလပျနဖေို့လိုအပျပါတယျ)
အားကစားမြားမြားလုပျပါ( အားကစားလုပျခွငျးက တဈခါတဈရံသငျ့ရဲ့စိတျကိုပါ အလိုလိုပှငျ့လာစပေါတယျ)
ပွငျပနဲ့ထိတှေ့ပွီး ပတျဝနျးကငျြက စကားသံတှေ၊ သုံးသပျခကျြတှကေိုနားထောငျပါ
အပွဈတငျမှုတှေကို လဈြလြူရှုပါ
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနားမလညျဖွဈနတေဲ့စိတျအ ခွေ နကေနမွေနျမွနျလှတျမွောကျနိုငျပါတယျ။